Laga yaabaa 18, 2018 admin
Unionbank ee Filibiin oo soo bandhigtay qalab macdanta Seeraar
Seeraar sii wadaan in ay soo jiitaan dareenka ay hay'adaha maaliyadeed. bangiga ugu weyn ee dalka Filibiin, Unionbank, ayaa soo bandhigtay qalab macdanta Seeraar shir ganacsi.
Tani waxay ka dhigan bangiga ugu horeysay si cad u weyn qodistani Seeraar.
Wada-hawlgalayaasha Infosys Hindiya ee la bangiyada oo shabag maaliyadda ganacsiga blockchain ku salaysan
Infosys waxaa sahaminta technology blockchain in ay keenaan-oolnimada cusub ganacsiga maaliyadda.
Shabakadda blockchain ku salaysan ganacsiga ayaa loogu talagalay in lagu digitize geedi socodka ganacsiga maaliyadda ganacsiga iyo meelaha sida ansaxinta lahaanshaha daboolayaa, shahaado of waraaqaha iyo lacagta.
Going weeraryahanka, kooxda looga golleeyahay in lagu abuuro “ecosystem blockchain dhamaystiran, oon ka qeyb dhinaca ansaxinta weyn of technology this,” ayuu yiri Ajay Gupta, Agaasimaha guud ee sare ee ICICI Bank.
Tel-Aviv lagu kala gato saamiyada si ay u isticmaalaan blockchain for madal amaahda cusub
The Tel Aviv Stock Exchange waxa uu isku kaashanayaa la Accenture iyo Floor The, ah xarun fintech Israel, si ay u dhisaan blockchain madal securities amaahda ah loogu talagalay in ay oggolaadaan in amaahda si toos ah kulli weelasha dhaqaale.
madal ay u shaqeyn doonaa sida “one-stop-dukaan ee dhammaan hawlaha securities daynta, saamaxdo helaan Muga securities weyn gaaban waqti-loox gudahood, xitaa ka hawlgala jagooyinka gaaban-dheer,” a dalalka war-saxaafadeed.
Binance ayaa qorshaynaysa in ay qarka u saaran ...
12 bangiyada Chinese blockchain loo isticmaalo 2017
Ku dhawaad ​​nus ka mid ah 2...
Post Previous:Sidee mid saadaalin dhaqanka ee heerka of cryptocurrency ah marka la eego tirada amarada kaalinta?